Brighton Beach Bach - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnthea
Igqibelele encinci ukubaleka iphedi eBrighton. Ngegumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa kunye nekhitshi, eli gumbi lokulala li-1 lilungile kwisibini. Igumbi elinye lokulala elineenkosi ezi-2 ezingatshatanga kwinqanaba eliphambili.
Imbono yolwandle ukusuka kwigumbi lokuhlala kunye nedekhi kunye nokuhamba imizuzu emi-2 ukuya elunxwemeni.
Impompo entsha yokufudumala epholileyo iya kugcina ingqele ingekho ngemini enoqhwithela.
Le yindlu "yesikolo esidala" enee-quirks kunye nomlingiswa oza ngobudala. Kube ngumsebenzi wothando ukuhlaziya i-bach kwinto ebiyiyo. Ikhanyiswe ngokuyinxenye kabini, inekhitshi elitsha, igumbi lokuhlambela elitsha kunye nomsebenzi omtsha wepeyinti ngaphakathi. Impompo entsha yobushushu ifanelekile ukufudumeza ebusika kwaye ipholile ehlotyeni.
Ukuhamba ngokulula ukuya elunxwemeni olugadiweyo, ikhefi kunye nevenkile yekona. Uninzi lokuhamba kunye neendawo zokugcina indalo kule ndawo. 90 ukuhamba okwesibini ukuya kulwandle oluthandekayo olulungele ukuhamba okude.
Umbuki zindwendwe ngu- Anthea
Sihlala ngaphandle kwedolophu ngoko ke asifumaneki kwiindwendwe, kodwa sinomphathi wepropathi ohlala ngaphaya kwendlela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dunedin